လူမှုရေးသိပ္ပံသုတေသနယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ – JobDescriptionSample
နေအိမ် / လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် / လူမှုရေးသိပ္ပံသုတေသနယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 18, 2016 လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက် Leave 604 views
ဓာတု Technician ယောဘကို Template ကို
စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနဖျေါပွခကျြ Template ကို
ဇီဝဓါတုဗေဒကိုသုံးပါ, ဏု, ပုံစံ, နှင့်အခြားသိပ္ပံအစားအစာများ၏ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေခံသဘောတရားများကိုဆနျးစစျဖို့; ဗီတာမင်ဓာတ်ပမာဏသိရှိနိုင်ရန်စားနပ်ရိက္ခာအကြောင်းအရာဆနျးစစျ, ဆီ, ကြား, နှင့်ပရိုတိန်း; အသစ်သောအစားအစာကိုအဖြေရှာ; လုံခြုံလုပ်ငန်းများ၌အစားအစာများကိုဖန်တီးရန်လေ့လာမှုနည်းလမ်းများ, ကျိုးနပ်, နှင့်အကျိုးရှိသော; နှင့်နည်းလမ်းမှအကြီးမြတ်ဆုံးနည်းလမ်းတွေသိရှိနိုင်ရန်မှအစားအစာသုတေသနကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ, အထုပ်, စောင့်ရှောက်, လက်လီ, နှင့်အစားအစာများမကယ်မလွှတ်.
အရိပ်သစ်ဝန်ဆောင်မှုများကို Check, မျက်နှာပြင်, အရသာ , ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအကြောင်းအရာများကို, နှင့်လိုက်နာမှုအစိုးရနှင့်စျေးကွက်သတ်မှတ်ချက်များမှ.
ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်များအတွက်ကောက်ချက်ချထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. ချိန်ခွင်လျှာသို့မဟုတ်ရငျ့ခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ. ကုန်ကြမ်းပါဝင်ပစ္စည်းများစစ်ကြော, နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး, အလွန်ကောင်းမွန်သော.
အရသာအာဏာပိုင်များနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေး, ဝန်ထမ်းကြီးထွား, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဒီဇိုင်နာများ, နှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပြဿနာများဖြေရှင်းရန်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်.
စစ်ဆင်ရေးနှင့်အစားအစာအပြောင်းအလဲနဲ့စစ်ကြောခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုများအတွက်အရည်အသွေးအာမခံချက် applications များ၏တိုးနှင့်အတူထွက်ကူညီ.
အစားအစာ၏ရှုထောငျ့ခိုင်မာစေရန်သုတေသနနည်းစနစ်, ထိုကဲ့သို့သောဥပမာပစ္စည်းဥစ္စာဖွဲ့စည်းပုံမှာများအတွက်အဖြစ်, ဟငျးခတျအမှေးအကွိုငျ, အရောင်, ကိုက်ညီမှု, အာဟာရကြောင်းတန်ဖိုးကို, သက်သာခြင်း.
အစားအစာများကိုတိုးမြှင်သို့မဟုတ်လတ်ဆတ်သောနည်းလမ်းများ Create, ကိုင်တွယ်ခြင်း, အသွင်အပြင်, စောင့်ရှောက်, နှင့်ကာကွယ်, သည်အခြားဖြစ်ကြောင်းသိပ္ပံနှင့်အတူဓာတုဗေဒနှင့်အတူအလုပ်သမားကျွမ်း.
အသီးအနှံဖန်ဆင်းခြင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အစားအစာစံချိန်စံညွှန်းများ, လုံခြုံရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို, နှင့်ရေနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးထောက်ပံ့ရေးသတ်မှတ်ချက်များဖြုန်း.
သန့်ရှင်းမှုနှင့် ပတ်သက်. အာဏာပိုင်များရဲနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်နာစေရန်အစားအစာ-processing ဒေသများ Check, ကာကွယ်မှု, အရည်အသွေး, နှင့်စွန့်ပစ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျှော်လင့်ချက်များ.
မျိုးဆက်နှင့်စပ်လျဉ်းလတ်ဆတ်တဲ့အစားအသောက်ပစ္စည်းများဆည်းပူး, client ကိုတုံ့ပြန်မှုသည်နှင့်အညီ.
အစားအစာများကိုနည်းပညာနှင့် ပတ်သက်. လက်တွေ့ပစ္စည်းများသုတေသနပြုခြင်းဖြင့်လတ်ဆတ်သောကန့်သတ်နှင့်လက်ရှိဖြစ်ရပ်များအပေါ် Up-to-နေ့ကရှိနေဆဲ.
အလုပ်-related စာရွက်စာတမ်းများအတွက်နားလညျမှု-နားလည်နိုင်မှုရှိစေရန်တိကျမ်းစာ၌လာသည်စာကြောင်းများနှင့်စာကြောင်း Reading.
Active ကိုနားထောင်ခြင်း-ရန်အခြားအရှေးရှေးအပြည့်အဝအာရုံစိုက်မှုရာပူဇော်သက္ကာကိုအခိုင်အမာအဘယျသို့, created ခံရသည့်အမှုအရာနားမလည်ဖို့အချိန်ရတဲ့, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးမြန်းကိစ္စများ, အစားမသငျ့လျြောဖြစ်ကြောင်းအခြေအနေများမှာကြားဖြတ်ထက်.
critical အတွေးအခေါ်-အသုံးပြုခြင်းယုတ္တိဗေဒနှင့်ရွေးချယ်မှုအခြားနည်းလမ်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အားနည်းချက်များကိုဆိုတာတွေ့ရဖို့ထင်, ကိစ္စများမှတွေ့ရှိချက်သို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ.
သင်ယူလတ်ဆတ်ဖြစ်ကြောင်းအချက်များကျွမ်းကျင်သို့မဟုတ်ပညာပေးသည့်အခါပြဿနာကိုတငျပွ coachingANDinstructional ချဉ်းကပ်မှုနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ Techniques-အသုံးချပြီးနှင့်ကောက်နေ.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏ခြေရာကောက်-TrackingPEREvaluating လုပ်ဆောင်ချက်ကို, အခြားအဖြစ်ကြောင်းကိုတစ်ဦးချင်းစီ, သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများကကုစားအရေးယူစဉ်းစားပါသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုထုတ်လုပ်ရန်.
သူတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကလုပ်ပေးနေချိန်တွင်လူမှု othersI တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အသိပညာမသိမဟုတ်သိနားလည်နိုင်စွမ်းကို-ဖြစ်ခြင်း.
ပစ္စည်းကိရိယာရွေးချယ်ရေး-ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အလုပ် execute မှအလေးအနက်ထားလိုအပ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများ၏မျိုး.
installation-Installing အစီအစဉ်များ, ထုတ်ကုန်, cabling, သတ်မှတ်ချက်များဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ် tools များ.
မြောက်မြားစွာဖြစ်ကြောင်း application များအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေး-Writing ကွန်ပျူတာ packages များ.
စစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်-မြင်လျှင်နောက်ထပ်ညွှန်းကိန်း, နာရီမျက်နှာပြင်, သို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုများမှန်ကန်စွာဖျော်ဖြေကိရိယာလည်းမရှိသေချာစေရန်.
tools တွေအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အခါဖော်ထုတ်သည်နှင့် upkeep ဘယ်လိုလိုအပ်ကြောင်းကို Maintenance-ဖျော်ဖြေ upkeep.
operating နှင့်ဤအကြောင်းကိုအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုရှေးခယျြဖြစ်ကြောင်းဆက်ကြောင်းများအတွက် troubleshooting-ဆုံးဖြတ်အကြောင်းရင်းများ.
မရှိမဖြစ်နည်းလမ်းများအသုံးချဖို့ Restoring-ပွငျထုတျကုနျသို့မဟုတ် devices များ.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း-conduction စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကုန်စည်၏စမ်းသပ်မှု, ပံ့ပိုးပေး, သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်.
ပညာနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ-စဉ်းစားပါဆုံးသင့်လျော်သောတဦးတည်းကိုရှာဖွေဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကြီးသောအမှုတို့ကိုအကြောင်းကို.
systems တစ် method ကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်သည်ကိုမည်သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ-ဖော်ထုတ်ခြင်း့ကိုဘယ်လိုအခြေအနေအပြောင်းအလဲများ, လုပ်ငန်းဆောင်တာ, နှင့် setting ကိုသက်ရောက်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ.
systems system ကို performance ကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များသို့မဟုတ်ရောဂါလက္ခဏာအားသုံးသပ်ခြင်း-ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်လည်းစက်များ၏ပစ်မှတ်များနှင့်အညီ, သင့်လျော်သောသို့မဟုတ်ထိရောက်မှုမြှင့်တင်ရန်အလေးအနက်ထားလိုအပ်သောလှုပ်ရှားမှုများ.
ပစ္စည်းများနည်းလမ်းများ-ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထူထောင်မှု၏သငျ့လျြောသောအသုံးချမှရှာတွေ့၏အုပ်ချုပ်ရေး, ဂီယာ, နှင့်ထုတ်ကုန်အချို့ function ကိုလုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ်.
ဝန်ထမ်းများလှုံ့ဆော်အရင်းအမြစ်များ-Creating ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, သူတို့အလုပ်လုပ်အဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဦးဆောင်, ကြောင်းအလုပ်တစ်ခုကိုများအတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးရှေးရှေးအဆုံးအဖြတ်.
customization / Mobility ကို – %
ရှုထောင့်မှအာရုံစူးစိုက်မှု – %
သမာဓိရှိခွငျး – %
တိုးတက်ရေး – %
စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များကယောဘဖျေါပွခကျြ Template ကို
ကို set up သို့မဟုတ်ဓာတ်ခွဲခန်းဂီယာစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုသို့မဟုတ်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကနေနမူနာကိုစုဆောင်း. နမူနာပြင်ဆင်ပါ …